Business – Page 591 – Zimbabwe Online News
Home » Archive by category "Business" (Page 591)
The EU has to date contracted €18 million under its Zimbabwe Sugar Adaption Strategy while a remaining €13,4 million will be contracted this year.
The post Zimbabwe secures US$17 million from EU appeared first on The Zimbabwe Independent.
THE Chamber of Mines Zimbabwe will at its annual general meeting and conference challenge government’s decision to repossess idle mining claims from mining companies.
The post Mines challenge land grab appeared first on The Zimbabwe Independent.
INVESTMENT returns and pension fund asset allocations will come under the spotlight next week at the 38th annual congress of the Zimbabwe Association of Pension Funds.The post Zapf congress to focus on asset allocation appeared first on The Zimbabwe In...
ZIMBABWE’s banking sector is slowly consolidating, and while still very competitive, is become slightly more concentrated.
The post Banks remain competitive appeared first on The Zimbabwe Independent.
591 of 617« Previous1…589590591592593…617Next »